Atrikasa - Shandong OBeer Masinina Fitaovana Co., Ltd.
Obeer no mpamatsy labiera malaza indrindra sy malaza indrindra any Shina, mifantoka tanteraka amin'ny fizotran'ny fanaovana labiera manontolo izahay, izay ao anatin'izany ny rafi-pisotro labiera, fitaovana fanaovana divay ary famokarana voankazo.
Ny famokarana dia manarona faritra mirefy 8000 metatra toradroa, miaraka amin'ny atrikasa efatra, milina fantsom-panafody argon, milina fandefasana fiara, uncoiler mandeha ho azy, milina miondrika, fitaovana welding, sns. Fanamarinana CE, injeniera, mpanara-maso ary mpanamboatra labiera 10 mahery no voasoratra anarana.
Ny orinasa Obeer dia manizingizina ny fotokevitra "ny asa dia manome lanja, manatsara ny serivisy", manaraka ny fitsipiky ny serivisy amin'ny "antsipiriany mitovy amin'ny kalitao", manao ezaka lehibe amin'ny fanavaozana ny modely fitantanana sy ny serivisy miorina amin'ny vokatra sy ny tombotsoan'ny teknolojia. Izahay dia miziriziry amin'ny fampiharana sy ny fivelarana amin'ny sehatra matihanina, manandrana ny tsara indrindra vitantsika mba hanampiana ny mpanjifa hahazo lanja tsara indrindra.
Mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny kalitaon'ny asa sy ny serivisy, ny orinasa Obeer dia nandalo ny taratasy fanamarinana kalitao ISO9001: 2008 sy ny fanandramana fanamarinana CE ho an'ny tsena eropeana sy amerika.
Miorina amin'ny foto-kevitry ny "kalitao ifotony", ny orinasa dia manaraka tanteraka ny teknolojia famokarana fitaovana labiera, mamolavola ary manamboatra fitaovana labiera sahaza ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany; ny fitaovana dia kanto amin'ny asa-tanana, tsara amin'ny fampisehoana ary mora ampiasaina, ary no safidy voalohany amin'ny famokarana labiera avo lenta. Manana mpahay siansa sy teknolojia kilasy voalohany izahay, teknolojia fanamboarana kilasy voalohany, teknisiana famokarana matihanina, fitaovana fanodinana mandroso, nanangana rafitra serivisy sy serivisy aorian'ny varotra ary manana fahaiza-manao sy tolotra tsara. Nandritra ny famokarana sy fiasa an-taonany maro, ny orinasa dia miezaka manome tetik'asa turnkey, mahatsapa ny fividianana trano tokana ary manome anao serivisy feno.
Tongasoa eto ny namana labiera rehetra tonga mitsidika anay.
Andao isika hanomboka hiresaka momba ny tetikasanao